Serchen: Ny laharana sy ny fanamarihanao ny app Cloud | Martech Zone
The Serchen serivisy eny an-tsena mihoatra ny mpivarotra 10,000 sy mpividy an-tapitrisany isan-taona. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamokatra tahiry marobe isa na fanamarihana izay hampifandray ireo mpividy sy mpivarotra amin'ny serivisy sy rindrambaiko cloud tsara indrindra amin'ny sokajy IaaS, PaaS ary SaaS.
IaaS - Fotodrafitrasa ho serivisy dia maodely iray famatsiam-bola izay ahitan'ny fikambanana iray fitaovana ampiasaina hanohanana ny asa, ao anatin'izany ny fitehirizana, ny fitaovana, ny lohamilina ary ny singa amin'ny tambajotra. Ny mpanome tolotra dia manana ny fitaovana ary tompon'andraikitra amin'ny trano, ny fihazakazahana sy ny fikojakojana azy. Matetika ny mpanjifa dia mandoa vola isaky ny ampiasaina.
SaaS - Software toy ny Service dia maodely fizarana lozisialy izay ampiasain'ny mpivarotra na mpanome tolotra serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny tambajotra, mazàna ny Internet.
Close - Sehatra ho serivisy dia fomba iray hanofana fitaovana, rafitra fiasa, fitehirizana ary fahafahan'ny tambajotra amin'ny Internet. Ny maodelin'ny fandefasana serivisy dia ahafahan'ny mpanjifa manofa mpizara virtoaly sy serivisy mifandraika amin'ny fampandehanana fampiharana efa misy na famolavolana sy fitsapana ireo vaovao.
Milamina tsara ny tranokala, voazarazara anaty sehatra mahafinaritra… ary manana bara fitadiavana manan-tsaina tokoa amin'ny fitadiavana ireo sehatra ilainao. Heveriko fa mbola misy fampiharana iray taonina tsy hita (mazava ho azy, tsy mbola misy ny fampiharana atolotra eto amintsika, na… tsy ho vita mihitsy izany) ary tsy dia vita loatra ny famerenana amin'izao fotoana izao; na izany aza, dingana lehibe amin'ny lalana tokony hamboarina tahiry tahak'izao!
Midira amin'ny Serchen ary avereno jerena ireo rindranasa tianao - ary hahita bebe kokoa!
Famaritana avy amin'ny SearchCloudComputing.
Tags: fanadihadihana rahonafanadihadihana rindrambaiko cloudiaashevitra momba ny haitao marketingpaashevitra momba ny lampihazonaotyhevitrasaasserchen
Zavers: fizarana tapakila nomerika avy amin'i Google